⁠ပွေးကိုင်း စိုက်ပျိုးနည်းအေ⁠ကြာင်းသိ⁠ကောင်းစရာ - Myanmar Farmers' Portal
Home စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ⁠ပွေးကိုင်း စိုက်ပျိုးနည်းအေ⁠ကြာင်းသိ⁠ကောင်းစရာ
မြန်မာအမည် – ပွေးကိုင်း
အင်္ဂလိပ်အမည် – INDIAN SANNA
ရုက္ခဗေဒအမည် – CASSIA ANGUSTIFOLA VANL
မျိုးရင်း – CAESALPINACEAE
ဆိုမာလီကျွန်း၊ အာရေဗျ၊ ဆစ်၊ ပန်ဂျပ် နှင့်အိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်း။
(၁) CASSIA ANGUSTIFOLIA VAHL.
(၂) CASSIA ACUTIFOLIA DELILE.
အကိုင်းအခက်များသော ပင်ပျော့၊ ပင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့် (၃) ပေ ခန့်ရှိသည်။ အရွယ်မှာ ရွက်ပေါင်းဖြစ်ပြီး လွှဲထွက်သည်။ ရွက်မြွာများသည်။ ငှက်တောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီး အရင်းသွယ်၍ ထိပ်ချွန်သည်။မျက်နှာချင်းဆိုင် ထွက်၍ (၅)စုံမှ (၆)စုံထိပါရှိ၏။ ရွက်ပြားချော၍ စိမ်းမှိုင်းသော အရောင်ရှိပြီး ရွက်နားညီသည်။ အပွင့်မှာအ၀ါရောင်ရှိသည်။ အသီးမှာ သီးတောင့်ရှည်ဖြစ်သည်။ ပြား၍ အနည်းငယ်ကွေးပြီး ချောမွေ့သည်။
ပွေးကိုင်းသည် မြေသြဇာအလွန် ညံ့ဖျင်းသော မြေများတွင် ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့်အပြင် မျိုးစေ့ချခါစ အချိန်တွင်သာ ရေအနည်းငယ်လိုသဖြင့် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း (အပူပိုင်း)ဒေသများတွင် များစွာ စိုက်ပျိုးသည်။
အပူချိန်အနည်းဆုံး (၅၀)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ အများဆုံး (၁၀၅) ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ရှိ၍ တစ်နှစ်လျှင် မိုးရေချိန် လက်မ (၄၀)ထက် မပိုသော အပူပိုင်းဒေသ ရာသီဥတုတွင် စိုက်ပျိုးပေါက်ရောက်နိုင်သည်။ မိုးများလွန်းပါက အမြစ်ပုပ်ရောဂါ နှင့် အရွက်များ ပေါ်တွင် မှိုရောဂါ ကျရောက်တတ်သည်။
မည်သည့် မြေမျိုးတွင် မဆိုစိုက်ပျိုးနိုင်သော်လည်း အပေါ်ယံလွှာသဲနုန်းမြေဖြစ်ပြီး အောက်မှ အမာခံမြေသားမျိုးကို နှစ်သက်သည်။
မြေအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပြုပြင်ရန် လိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ထယ် (၂)စပ်၊ ထွန် (၃)စပ်ဖြင့် ထွန်ယက်ပြီး လိုအပ်သော ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မြေဆွေးများကြဲပေးရ၏။ ထို့နောက် ထွန်ဖြင့်မွှေပြီး ကြမ်းတုံးဖြင့် မြေညှိပေးရသည်။
ပွေးကိုင်းပင်သည် တပင် နှင့် တပင် (၃)ပေ ကွာ လေးကွက်ကြား စိုက်ပျိူးရသည်။စိုက်ပျိုးပုံမှာ ထွန်သွားကို (၃) ပေ ခြားပြီး လေးကွက်ကြားကြောင်းဆွဲ၍ ကွက်ဆုံနေရာများတွင် မျိုးစေ့ (၃) စေ့မှ (၅) စေ့ ထိထည့်ပြီး ကြမ်းတုံးဖြင့် ဖုံးပေးရသည်။
တဧကလျှင် အမိုနီယမ်ဖော့(စ်)ဖိတ် ခေါ် သာကူစေ့ ဓာတ်မြေသြဇာ (၃၀) ပိဿာမှ (၅၀) ပိဿာ ထိ မြေအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ထည့်ပေးရသည်။ သာကူစေ့ ဓာတ်မြေသြဇာ အရနိင်ပါက နွားချေးမြေဆွေး သို့မဟုတ် သစ်ရွက်ဆွေး မြေကို တဧကလျှင် တင်း (၁၀၀)မှ (၂၀၀) ထိ မြေ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ထည့်ပေးရသည်။ နွားချေး မြေဆွေးကို သုံးပါက ပွေးကိုင်းပင် များတွင် အမြစ်ရောဂါ ကျေ၇ာက်တတ်သဖြင့် သတိပြု၍ သုံးစွဲရန် လိုပါသည်။
မျိုးစေ့ချပြီးနောက် မိုးလုံလောက်စွာ မရွာသွန်းပါက ရေတကြိမ် သွင်းပေးရန် လိုသည်။ အစိုဓာတ် လုံလောက်စွာ ရှိပါက (၃) ရင်မှ (၇) ရက်အတွင်း အပင်များ ပေါက်လာသည်။ အပင်ပေါက်စအချိန် ရေသွင်းပါက အပင်ငယ်ကလေးများ သေသွားတတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သက်တန်း (၆) လအတွင်း ရေ (၃) ကြိမ် သွင်းပေးပါက လုံလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ နှင့် မြေအခြေအနေကို ကြည့်၍ သင့်လျော်သလို ဆောင်ရွက်ပေးရသည်။
ပွေးကိုင်းသည် စိုက်ပြီးနောက် (၂) အတွင်း အပင်ပေါက်ကလေးများအား အခြားပေါင်းပင်များက အလွယ်တကူဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်သဖြင့် အချိန်မှီ ကြားထွန်လိုက်ခြင်း၊ ပင်ခြေတွင် ပေါင်းရှင်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုသည်။
တစ်ဧကလျှင် ပွေးကိုင်းမျိုးစေ့ (၁) ပြီခန့် လိုသည်။
သက်တန်း (၂) နှစ် ကျော်ခန့် ရှည်သည်။
ကျရောက်တတ်သော ပိုးမွှားများ နှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
၁။ ပျ နှင့် ဖြုတ်စိမ်းများ
၃။ ရွက်စားပိုး တီကောင်များ ဖြစ်သည်။
၁။ ပိုးများသည် ပေါင်းများ ကြားတွင် ခိုအောင်းပေါက်ပွား တတ်သဖြင့် ပေါင်းမြက်များကို ကောင်းစွာ ရှင်းလင်းပေးရန် လိုသည်။
၂။ ပျ နှင့် ဖြုတ်စိမ်းကောင်များအား မာလာသီယွန် ဆေးရည်တဆကို ရေ (၂၀၀) မှ (၅၀၀) ထိ ရောစပ် ပက်ဖျန်းပေးရသည်။
၃။ကျိုးကောင်နှင့် ရွက်စားပိုး တီကောင်များကို ဒီဒီတီ သို့မဟုတ် လင်ဒိန်း ပိုးသတ်ဆေး (၁) ဆ လျှင် ရေအဆ (၂၀၀) မှ (၅၀၀) အထိ ရောစပ်ပက်ဖျန်းပေးရသည်။
၄။ ကျိုင်းကောင်များသည် ပွေးကိုင်းပင်ခြေမြေတွင်းတွင် ခိုအောင်းတက်သဖြင့် အော်ဒရင်း ဆေးမှုန့်ကို မြေပေါ်တွင် ပက်ဖျန်းပြီး ထွန်ဖြင့် မွှေပေးရသည်။
ကျရောက်တတ်သော ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ
မှိုရောဂါ ကျရောက်တတ်သော်လည်း အပင်များပျက်စီးလောက်အောင် ကျရောက်ခြင်းမရှိသေးချေ။
စိုက်ပြီး (၄၁/၂) လ အကြာတွင် အရွက်များကို စတင် ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ အပင်၏အောက်ခြေပိုင်းမှ အရွက်များကို စတင်ဆွတ်ခူးရသည်။ တကြိမ်ဆွတ်ခူးပြီးနောက် (၇) ရက် (၁၅) ရက်ခြားပါက တကြိ်မ် ထပ်မံဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ ပွေးကိုင်းရွက်များ အရင့်လွန်သွားပါက ဆေးအာနိသင် လျော့ပါးသွားနိုင်သဖြင့် မရင့်လွန်း မနုလွန်းသော အရွက်များကို ခူးရသည်။
နေပူတွင် တိုက်ရိုက် အခြောက်လှန်းလျှင် ဆေး အာနိသင် လျော့ပါးတတ်သဖြင့် အ၇ိပ်အောက်တွင် အခြောက်လှန်းရ၏ အကောင်းဆုံးအခြောက်လှန်းနည်းမှာ အမိုး နှင့် အကာပါသော တဲငယ်တစ်ခုထိုးပြီး အကာကို လူနေအိမ်ကဲ့သို့ လေးဘက်လေးတန် အပြည့်ကာရန်မလိုဘဲ ပွေးကိုင်းရွက်များ လွင့်မသွားရန် သင့်ရုံကာပေးလျှင် လုံလောက်သည်။ ၄င်းတဲအတွင်းတွင် ပွေးကိုင်းရွက်များ ခပ်ပါးပါး ဖြန့်၍ ခင်းနိုင်ရန် စင်များကို အဆင့်ဆင့်ထိုးပေးရ၏။ ၄င်စင်များပေါ်တွင် ပွေးကိုင်းရွက်များ ဖြန့်ပြီးနောက် ဖျာ သို့မဟုတ် ၀ါး ခပ်ကျဲကျဲဖြင့် ဖိပေးရသည်။ စင် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် မပြုလုပ်လိုပါက မြေပေါ်တွင် ဖျာတစ်ချပ်ခင်းပြီး ပွေးကိုင်းရွက်များကို ဖြန့်ကျဲကာ အပေါ်မှ ဖျာတစ်ချပ် ဖိထားရသည်။ ပွေးကိုင်းသည် နေအပူရှိန် ကောင်းပါက (၃) ရက်အတွင်း ခြောက်နိုင်သည်။ လက်ဖြင့် ကိုင်ကြည့်ပါက ကျိုးသွားသည်အထိ ခြောက်သွေ့လွန်းသော ပွေးကိုင်းရွက်များသည် ဆေးအာနိသင် လျော့ပါးသွားတက်သဖြင့် မခြောက်လွန်း၊ မစိုလွန်းသော ပွေးကိုင်းရွက်များကို ရရှိအောင် အခြောက်လှန်းရန် လိုသည်။
တစ်ဧကလျှင် အရွက်ခြောက် (၅၀) မှ (၈၀) ပိဿာ။
မျိုးစေ့ – (၁) တင်း
အသီးခွံ – (၅) တင်း ခန့် ထွက်ရှိ၏။
အသီးခွံ မည်းခြောက်လာသော အခါမှ မျိုးစေ့ရင့်သဖြင့် ၄င်းအချိန်တွင် အသီးများ မကွဲအပ်မီဆွတ်ခူးကာ မျိုးစေ့များ ထုတ်ယူ၍ အခြောက်လှန်းပြီး လေလုံသော သံပုံးများတွင် ထည့်သွင်း သိုလှောင်ထားရ၏။
အရွက် – (၁) ပွေးကိုင်းကို ၀မ်းသက်ဆေးအဖြစ် အထူးဖော်စပ် အသုံးပြု၏။ အညောင်းပူ၊ ဆီးပူ၊ ခြေပူ၊ အခိုးပူ နှင့် အပုပ်အခိုးတို့ကို နှိမ်ရန် ၀မ်းနှုတ်ဆေး အဖြင့် သုံးလိုသော် နို့ လက်ဖတ်ရည် ပန်ကန်တလုံးတွင် ပွေးကိုင်းပြုတ်ရည်ကျကျ တဇွန်း၊ သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို အခြေအနေကြည့်၍ ရောစပ်ပြီး သောက်ရသည်။
(၂) ဆီးရွှင် ၀မ်းနှုတ်ဆေး၊ အပုပ်ချဆေး၊ မျက်စိအတွင်း ဆေးများတွင် ပွေးကိုင်းကို အရေးကြီးသော ဆေးတမျိုး အနေဖြင့်လည်း ထည့်သွင်းဖော်စပ်သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဆေးညွှန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ သမားတော်ကြီးများ၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ယူပြီးမှ အသုံးပြု သင့်ပါသည်။
မနျမာအမညျ – ပှေးကိုငျး
အင်ျဂလိပျအမညျ – INDIAN SANNA
ရုက်ခဗဒေအမညျ – CASSIA ANGUSTIFOLA VANL
မြိုးရငျး – CAESALPINACEAE
ဆိုမာလီကြှနျး၊ အာရဗြေ၊ ဆဈ၊ ပနျဂပျြ နှငျ့အိန်ဒိယပွညျတောငျပိုငျး။
အကိုငျးအခကျမြားသော ပငျပြော့၊ ပငျငယျမြိုး ဖွဈသညျ။ အမွငျ့ (၃) ပေ ခနျ့ရှိသညျ။ အရှယျမှာ ရှကျပေါငျးဖွဈပွီး လှဲထှကျသညျ။ ရှကျမွှာမြားသညျ။ ငှကျတောငျပုံသဏ်ဍာနျဖွဈပွီး အရငျးသှယျ၍ ထိပျခြှနျသညျ။မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ထှကျ၍ (၅)စုံမှ (၆)စုံထိပါရှိ၏။ ရှကျပွားခြော၍ စိမျးမှိုငျးသော အရောငျရှိပွီး ရှကျနားညီသညျ။ အပှငျ့မှာအဝါရောငျရှိသညျ။ အသီးမှာ သီးတောငျ့ရှညျဖွဈသညျ။ ပွား၍ အနညျးငယျကှေးပွီး ခြောမှသေ့ညျ။
ပှေးကိုငျးသညျ မွသွေဇာအလှနျ ညံ့ဖငျြးသော မွမြေားတှငျ ကောငျးစှာ ဖွဈထှနျးနိုငျသညျ့အပွငျ မြိုးစခေ့ခြါစ အခြိနျတှငျသာ ရအေနညျးငယျလိုသဖွငျ့ မွနျမာပွညျအလယျပိုငျး (အပူပိုငျး)ဒသေမြားတှငျ မြားစှာ စိုကျပြိုးသညျ။
အပူခြိနျအနညျးဆုံး (၅၀)ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျမှ အမြားဆုံး (၁၀၅) ဒီဂရီ ဖာရငျဟိုကျရှိ၍ တဈနှဈလြှငျ မိုးရခြေိနျ လကျမ (၄၀)ထကျ မပိုသော အပူပိုငျးဒသေ ရာသီဥတုတှငျ စိုကျပြိုးပေါကျရောကျနိုငျသညျ။ မိုးမြားလှနျးပါက အမွဈပုပျရောဂါ နှငျ့ အရှကျမြား ပျေါတှငျ မှိုရောဂါ ကရြောကျတတျသညျ။
မညျသညျ့ မွမြေိုးတှငျ မဆိုစိုကျပြိုးနိုငျသျောလညျး အပျေါယံလှာသဲနုနျးမွဖွေဈပွီး အောကျမှ အမာခံမွသေားမြိုးကို နှဈသကျသညျ။
မွအေခွအေနပေျေါမူတညျပွီး ပွုပွငျရနျ လိုသညျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ထယျ (၂)စပျ၊ ထှနျ (၃)စပျဖွငျ့ ထှနျယကျပွီး လိုအပျသော ဓာတျမွသွေဇာ၊ မွဆှေေးမြားကွဲပေးရ၏။ ထို့နောကျ ထှနျဖွငျ့မှပွေီး ကွမျးတုံးဖွငျ့ မွညှေိပေးရသညျ။
ပှေးကိုငျးပငျသညျ တပငျ နှငျ့ တပငျ (၃)ပေ ကှာ လေးကှကျကွား စိုကျပြိူးရသညျ။စိုကျပြိုးပုံမှာ ထှနျသှားကို (၃) ပေ ခွားပွီး လေးကှကျကွားကွောငျးဆှဲ၍ ကှကျဆုံနရောမြားတှငျ မြိုးစေ့ (၃) စမှေ့ (၅) စေ့ ထိထညျ့ပွီး ကွမျးတုံးဖွငျ့ ဖုံးပေးရသညျ။
တဧကလြှငျ အမိုနီယမျဖော့(ဈ)ဖိတျ ချေါ သာကူစေ့ ဓာတျမွသွေဇာ (၃၀) ပိဿာမှ (၅၀) ပိဿာ ထိ မွအေခွအေနကေိုကွညျ့ပွီး ထညျ့ပေးရသညျ။ သာကူစေ့ ဓာတျမွသွေဇာ အရနိငျပါက နှားခြေးမွဆှေေး သို့မဟုတျ သဈရှကျဆှေး မွကေို တဧကလြှငျ တငျး (၁၀၀)မှ (၂၀၀) ထိ မွေ အခွအေနကေို ကွညျ့ပွီး ထညျ့ပေးရသညျ။ နှားခြေး မွဆှေေးကို သုံးပါက ပှေးကိုငျးပငျ မြားတှငျ အမွဈရောဂါ ကရြောကျတတျသဖွငျ့ သတိပွု၍ သုံးစှဲရနျ လိုပါသညျ။
မြိုးစခေ့ပြွီးနောကျ မိုးလုံလောကျစှာ မရှာသှနျးပါက ရတေကွိမျ သှငျးပေးရနျ လိုသညျ။ အစိုဓာတျ လုံလောကျစှာ ရှိပါက (၃) ရငျမှ (၇) ရကျအတှငျး အပငျမြား ပေါကျလာသညျ။ အပငျပေါကျစအခြိနျ ရသှေငျးပါက အပငျငယျကလေးမြား သသှေားတတျသညျ။ ယဘေုယအြားဖွငျ့ သကျတနျး (၆) လအတှငျး ရေ (၃) ကွိမျ သှငျးပေးပါက လုံလောကျပွီ ဖွဈသညျ။ မိုးရှာသှနျးမှု အခွအေနေ နှငျ့ မွအေခွအေနကေို ကွညျ့၍ သငျ့လြျောသလို ဆောငျရှကျပေးရသညျ။
ပှေးကိုငျးသညျ စိုကျပွီးနောကျ (၂) အတှငျး အပငျပေါကျကလေးမြားအား အခွားပေါငျးပငျမြားက အလှယျတကူဖုံးလှမျးသှားနိုငျသဖွငျ့ အခြိနျမှီ ကွားထှနျလိုကျခွငျး၊ ပငျခွတှေငျ ပေါငျးရှငျးပေးခွငျးမြား ဆောငျရှကျရနျ လိုသညျ။
တဈဧကလြှငျ ပှေးကိုငျးမြိုးစေ့ (၁) ပွီခနျ့ လိုသညျ။
သကျတနျး (၂) နှဈ ကြျောခနျ့ ရှညျသညျ။
ကရြောကျတတျသော ပိုးမှားမြား နှငျ့ ကာကှယျနှိမျနငျးနညျးမြား
၁။ ပြ နှငျ့ ဖွုတျစိမျးမြား
၃။ ရှကျစားပိုး တီကောငျမြား ဖွဈသညျ။
၁။ ပိုးမြားသညျ ပေါငျးမြား ကွားတှငျ ခိုအောငျးပေါကျပှား တတျသဖွငျ့ ပေါငျးမွကျမြားကို ကောငျးစှာ ရှငျးလငျးပေးရနျ လိုသညျ။
၂။ ပြ နှငျ့ ဖွုတျစိမျးကောငျမြားအား မာလာသီယှနျ ဆေးရညျတဆကို ရေ (၂၀၀) မှ (၅၀၀) ထိ ရောစပျ ပကျဖနျြးပေးရသညျ။
၃။ကြိုးကောငျနှငျ့ ရှကျစားပိုး တီကောငျမြားကို ဒီဒီတီ သို့မဟုတျ လငျဒိနျး ပိုးသတျဆေး (၁) ဆ လြှငျ ရအေဆ (၂၀၀) မှ (၅၀၀) အထိ ရောစပျပကျဖနျြးပေးရသညျ။
၄။ ကြိုငျးကောငျမြားသညျ ပှေးကိုငျးပငျခွမွေတှေငျးတှငျ ခိုအောငျးတကျသဖွငျ့ အျောဒရငျး ဆေးမှုနျ့ကို မွပေျေါတှငျ ပကျဖနျြးပွီး ထှနျဖွငျ့ မှပေေးရသညျ။
ကရြောကျတတျသော ရောဂါမြားနှငျ့ ကာကှယျနှိမျနငျးနညျးမြား
မှိုရောဂါ ကရြောကျတတျသျောလညျး အပငျမြားပကျြစီးလောကျအောငျ ကရြောကျခွငျးမရှိသေးခြေ။
စိုကျပွီး (၄၁/၂) လ အကွာတှငျ အရှကျမြားကို စတငျ ဆှတျခူးနိုငျသညျ။ အပငျ၏အောကျခွပေိုငျးမှ အရှကျမြားကို စတငျဆှတျခူးရသညျ။ တကွိမျဆှတျခူးပွီးနောကျ (၇) ရကျ (၁၅) ရကျခွားပါက တကွိမျ ထပျမံဆှတျခူးနိုငျသညျ။ ပှေးကိုငျးရှကျမြား အရငျ့လှနျသှားပါက ဆေးအာနိသငျ လြော့ပါးသှားနိုငျသဖွငျ့ မရငျ့လှနျး မနုလှနျးသော အရှကျမြားကို ခူးရသညျ။
နပေူတှငျ တိုကျရိုကျ အခွောကျလှနျးလြှငျ ဆေး အာနိသငျ လြော့ပါးတတျသဖွငျ့ အရိပျအောကျတှငျ အခွောကျလှနျးရ၏ အကောငျးဆုံးအခွောကျလှနျးနညျးမှာ အမိုး နှငျ့ အကာပါသော တဲငယျတဈခုထိုးပွီး အကာကို လူနအေိမျကဲ့သို့ လေးဘကျလေးတနျ အပွညျ့ကာရနျမလိုဘဲ ပှေးကိုငျးရှကျမြား လှငျ့မသှားရနျ သငျ့ရုံကာပေးလြှငျ လုံလောကျသညျ။ ၎င်းငျးတဲအတှငျးတှငျ ပှေးကိုငျးရှကျမြား ခပျပါးပါး ဖွနျ့၍ ခငျးနိုငျရနျ စငျမြားကို အဆငျ့ဆငျ့ထိုးပေးရ၏။ ၄ငျစငျမြားပျေါတှငျ ပှေးကိုငျးရှကျမြား ဖွနျ့ပွီးနောကျ ဖြာ သို့မဟုတျ ဝါး ခပျကြဲကြဲဖွငျ့ ဖိပေးရသညျ။ စငျ အဆငျ့ဆငျ့ဖွငျ့ မပွုလုပျလိုပါက မွပေျေါတှငျ ဖြာတဈခပျြခငျးပွီး ပှေးကိုငျးရှကျမြားကို ဖွနျ့ကြဲကာ အပျေါမှ ဖြာတဈခပျြ ဖိထားရသညျ။ ပှေးကိုငျးသညျ နအေပူရှိနျ ကောငျးပါက (၃) ရကျအတှငျး ခွောကျနိုငျသညျ။ လကျဖွငျ့ ကိုငျကွညျ့ပါက ကြိုးသှားသညျအထိ ခွောကျသှလှေ့နျးသော ပှေးကိုငျးရှကျမြားသညျ ဆေးအာနိသငျ လြော့ပါးသှားတကျသဖွငျ့ မခွောကျလှနျး၊ မစိုလှနျးသော ပှေးကိုငျးရှကျမြားကို ရရှိအောငျ အခွောကျလှနျးရနျ လိုသညျ။
တဈဧကလြှငျ အရှကျခွောကျ (၅၀) မှ (၈၀) ပိဿာ။
မြိုးစေ့ – (၁) တငျး
အသီးခှံ – (၅) တငျး ခနျ့ ထှကျရှိ၏။
အသီးခှံ မညျးခွောကျလာသော အခါမှ မြိုးစရေ့ငျ့သဖွငျ့ ၎င်းငျးအခြိနျတှငျ အသီးမြား မကှဲအပျမီဆှတျခူးကာ မြိုးစမြေ့ား ထုတျယူ၍ အခွောကျလှနျးပွီး လလေုံသော သံပုံးမြားတှငျ ထညျ့သှငျး သိုလှောငျထားရ၏။
အရှကျ – (၁) ပှေးကိုငျးကို ဝမျးသကျဆေးအဖွဈ အထူးဖျောစပျ အသုံးပွု၏။ အညောငျးပူ၊ ဆီးပူ၊ ခွပေူ၊ အခိုးပူ နှငျ့ အပုပျအခိုးတို့ကို နှိမျရနျ ဝမျးနှုတျဆေး အဖွငျ့ သုံးလိုသျော နို့ လကျဖတျရညျ ပနျကနျတလုံးတှငျ ပှေးကိုငျးပွုတျရညျကကြ တဇှနျး၊ သို့မဟုတျ လိုအပျသလို အခွအေနကွေညျ့၍ ရောစပျပွီး သောကျရသညျ။
(၂) ဆီးရှငျ ဝမျးနှုတျဆေး၊ အပုပျခဆြေး၊ မကျြစိအတှငျး ဆေးမြားတှငျ ပှေးကိုငျးကို အရေးကွီးသော ဆေးတမြိုး အနဖွေငျ့လညျး ထညျ့သှငျးဖျောစပျသညျ။
မှတျခကျြ။ ။ ဆေးညှနျးမြားကို သကျဆိုငျရာ သမားတျောကွီးမြား၏ ခှငျ့ပွုခကျြကို ယူပွီးမှ အသုံးပွု သငျ့ပါသညျ။